ONN:Oduu Olmaa Oromiyaa Gurraandhala and Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo | Kichuu
ONN:Oduu Olmaa Oromiyaa Gurraandhala and Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Posted on February 6, 2018 by kichuu_admin
Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo Torbanittii Guyyaa Sadii Facaasaa (Kibxata) Kamisaa fi Jimaata Akka Lakkofsa Sa’aa Oromoo tti Galgala Keessaa sa’aa 7:30 Iraa Amma 8:00 tti Metir baandii 16 KHZ 17840 Irratti Kan Isinii Darbu Dha.”Nuti, Qeerroon Oromoo, seenaa wareegama qabsaa’ota Bilisummaa Oromoo haga yoonaatti galmeeffameef kabajaa guddaa kennaa, nutis akka dhaloota haaraatti wareegama bilisummaa baasuuf kaanee jirra.” Qabsoon itti fufa! Garboonfataan ni kufa!!
Gurandhala 6/2018 Sochiin Warraaqsa FXG itti fufe.Dhihaa Oromiyaa Magaalaa Neqemteetti Qeerroon Dargaggootni Oromoofi Uummaatni Oromoo Simannaa Sabboontoota Ilmaan Oromoo mana hidhaa wayyaanee kessaa waggaa lamaa oliif hiraarfamaa turanii kaleessa gadhiifamaniif godhamee irratti Sagalee mormii guddaa mootummaa garboonfata wayyaanee irratti dhageesisan. Hidhamtootni sabboontota ilmaan Oromoo hiikkaman kanneen akka :
1) Barsiisaa Booranaa Raggaasaa
2) barsiisaa Amantii Lammeessaa
3) Barsiisaa Hayiluu Gammadaafi
4) Hojjetaa fayyaa Guddisaa Bayyanaa kanneen jedhaman keessatti argamaniif simannaan ho’aan godhameef.
Qeerroon Dargaggootni Oromoofi Uummaatni Oromoo Magaalaa Neqemtee Simannaa taasisaniin Sagalee Mormii guddaa dhageesisuun Sochii warraaqsaa FXG itti fufsiisan. Dhaadannoowwaan armaan gadii kana dhageesisuun qabsoo ilisummaa Oromoo finiinsuun poolisoota federaalaa muddan.
-Hidhamtootni Siyaasaa Oromoo hundii haalduraa tokko malee haa hiikjaman.
-Murtiin manni murtii wayyaanee obboo Baqalee Garbaafi wayillaan isaanii irraatti dabarsee atattamaan haqamee hiikkamuu qabu.
-Gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo deebii argatuu qaba.
-Wayyaanotni yakka ilmaan Oromoorratti raawwatan seeratti dhiyaachuu qabu. jechuun warraaqsa finiinsan.
Sochiin Warraaqsa FXG finiinee jiru guutummaa biyyattii keessatti jabaatee ittifufuu qaba, injifannoo hanga mammatti wareegama qaaliin argannee waloon tikfachaa furmaatni tokkichi mootummaa Wayyaanee hundeen qaarisuun bilisummaafi walabummaa keenya gonfachuuf bakka jirtan cufaa qabsoo bilisummaa Oromoo akka finiinsinu jechuun Qeerroon Bilisummaa dhaamsa dabarsera.
Da,imaan Matti somaale irraa buqifamani immiman roobisaa Tokkuumaa Sabaa oromoo farfaatuu.
Bishooftuu-Haalli Bishooftuu keessa jiru ammayyu haala fokkisadha. Jarri qeerroo waliin walitti bu’an suun kalessa 5/2/2018 moora mekelak
eya dhiitanii ba’uun wardiyya irra meshaa waranaa fudhatanii dhiibba geessisaa turan.
Namnii du’e jirachuu baattus kalessa magalli gutuun jeeqamaa ture. Gaaffi isaan gaafataan yoo jiraate, qe’ee kenyatti nugalchaa kan jedhu ture. garuu generalli yeroo san bakka sana ture nuti walitti isiin araarsiina jedhee kadhachaa ture isaaniis sana hinbarbannu xiyyara nuuf ramadaa biyya kenyatti nu galcha kanjedhuu ture.
Dhuma irratti garu umnaan mooraa dhiitanii ba’uun gamo TVS nanno sanatti argamuu daakuu gochuun nama kararratti arganiif konkolaataa kararratti argaan rukkuta turan. sana kessa kan to’anna jala olaniis jiru kaan miliqanii jiru. OolmaaHar’aa
ONN : Oduu Olmaa Oromiyaa Amajjii 4/2018
Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts- 31 January 2018 and SAGALEE QEERROO AMAJJII 30 2018 :-